Shiinaha oo wata Shandado iyo Bikini Emojis, Spain oo Dooneysa Soo Celinta Dalxiisayaasha Soosaarayaasha iyo Alaabada | Biyoodka
Iyada oo la socota Shandado iyo Bikini Emojis, Spain waxay raadineysaa soo noqoshada dalxiisayaasha
Spain ayaa dib u eegis ku sameysay tirada dhimashada coronavirus Isniintii waxayna ku boorisay dalxiisayaasha ajaanibta ah inay soo laabtaan laga bilaabo bisha Luulyo maadaama ay fududeyneyso mid ka mid ah xiritaanka ugu adag Yurub, in kasta oo ganacsiyada dalxiisku ay shaki ka qabaan badbaadinta xilliga xagaaga.
Dalka labaad ee ugu booqashada badan adduunka ayaa albaabada iyo xeebaha u xirtay bishii Maarso si ay ula tacaalaan Cudurka faafa ee COVID-19, markii dambena soo rogay karantiil labo toddobaad ah oo ku saabsan booqdayaasha dibedda. Laakiin shuruuddaas ayaa laga qaadi doonaa 1-da Luulyo, ayaa lagu yiri war ay soo saartay dowladda.
"Waxa ugu xun ayaa naga dambeeya," Wasiirka Arimaha Dibada Arancha Gonzalez Laya ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qortay emoji ah bikini, muraayadaha indhaha iyo shandad.
“Bisha July waxaan si tartiib tartiib ah ugu fureynaa Spain dalxiisayaasha caalamiga ah, waxaan qaadi doonaa karantiillada, waxaan hubin doonaa heerarka ugu sareeya ee caafimaadka caafimaadka. Waxaan sugeynaa 2 inaan ku soo dhaweyno! ”
Waxaa lagu soo bandhigay May 15 digniin yar, karantiilku wuxuu jahwareer ku keenay warshadaha dalxiiska iyo xiisadda ka dhalatay deriska Faransiiska. Iyada oo kor u qaadeysa, dowladdu waxay rajeyneysaa inay wax ka qabato burburka isgaarsiinta ee hore waxayna ku jiri doontaa boos xoogan oo lagu soo jiito dalxiisayaasha ajaanibta ah xagaagan.
Isbaanishku wuxuu sida caadiga ah sanadkii qaadaa 80 milyan oo qof, iyada oo dalxiiska lagu qiyaaso in ka badan 12 boqolkiiba waxsoosaarka guud ee gudaha iyo xitaa shaqooyin badan oo la wadaago, sidaa darteed xilliga xagaaga ayaa muhiim u ah fursadaha yareynta hoos u dhaca dhaqaale ee soo socda.
Wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale dib u eegis ku sameysay tirada dhimashada ku dhowaad 2,000 ilaa 26,834 ka dib markii ay hubisay xogta ay bixiyeen gobolada, waxayna sheegtay in 50 qof oo kaliya ay u dhinteen viruska usbuucii la soo dhaafay, hoos u dhacaas oo ka muuqanaya todobaadyadii hore. Wadarta tirada kiisaska sidoo kale dib ayaa loo eegay ilaa 235,400.
Baararka iyo makhaayadaha ku yaal Madrid iyo Barcelona waxaa loo oggolaaday inay furan banaanka banaankooda awood ahaan kala badh laga bilaabo Isniinta, laakiin qaar badan baa xirmay iyadoo milkiilayaashu ay miisaameen qiimaha wax u qabashada dad yar.
Qaar ka mid ah kuwa furay waxay ahaayeen rajo xumo.
Alfonso Gomez, oo ah milkiilaha maqaayada ku leh magaalada Barcelona ayaa yiri: “Waa arin cakiran, ma awoodi karno inaan badbaadinno xilliyada dalxiiska, haddii aysan ajnabi [ku filan] imaanin.